Company Zhonghe Hyundai si firfircoon fulinta horumarka sayniska iyo farsamada, uunka oo tayo leh, fidinta suuqa, iyo talanti abuurka dhismaha afar mashruuc oo waaweyn, si ay u casriyayn Company Zhonghe gelin casriyeynta ka mid ah maamulka, caalami brand, technology wax soo saarka, iyo Caalamiyeynta iibka . Shirkadda ku dadaaleysaa in ay noqdaan alaab-hormuudka ka ah wax soo saarka warshadaha ee adduunka ee.
"Made in China 2025" hormarsataan, hoggaansamaan siyaasadda asaasiga ah "tayo-oriented abuurnimo-kexeeyey, tayada ugu horeysay, horumarinta cagaaran, ayna dhismaha,". Shiinaha ee soo saarta 2025, waa wax go'an oo ka mid ah isbeddelka iyo casriyeyn ah warshadaha Shiinaha ee wax soo saarka, in rajada weyn ee dalka, Shandong Qingyun qalab mashiinka Protective Cover Warshadaha Co., Ltd., Shandong Qingyun Modern Qing Tai Spring Warshadaha Co., Ltd., Shandong Central Jarmal Intelligent korontada warshadaha Co., Ltd., Qingdao Grand Green Wind xoog New Energy Development Co., Ltd. Yantai US-Asia Dege Environmental Protection Technology Co., Ltd., Shandong Hao Xing Tatsu tuuboyinka rakiban Industrial Co., Ltd. si wadajir ah oo ka kooban Shandong Hyundai Sinobo qiray Makiinado Warshadaha Co., Ltd. ku saleysan hadda, muddo dheer diirada u. In view of xannibaya ka bottleneck iyo link daciif ah horumarinta warshadaha, xawaaraha kor Isbadal iyo casriyeyn iyo wanaajinta tayada iyo hufnaanta, tartan asaasiga ah iyo kartida horumar waara ee warshadaha wax soo saarka ayaa la soo hagaagtay. Si sax ah u haleelaan wareega cusub ee kacaanka sayniska iyo farsamada iyo isbedelka warshadaha arrimuhu, xoojiyaan qorshaha istaraatiijiyadeed iyo mustaqbalka eegaya geeyo, aasaaska hoos-to-dhulka, tartanka mustaqbalka ku fadhiisato meelaha amrayo. Shirkada casriga Sinobo waxa uu wadaa horumarinta sayniska iyo tiknoolajiyada, brand tayada, horumarinta suuqa, talanti si ay u abuuraan afar mashruuc oo waaweyn, si loo dhiso shirkad galay maamulka casri ah, caalami brand, aragti wax soo saarka, Caalamiyeynta marketing ee casriyeynta shirkadaha iyo dabagalka in ay wax soo saarka warshadaha ugu fiican adduunka ee qeybiyeyaasha fiican. dadka Sinobo Modern ruuxa "diiran, adag, waaqiciga ah, intii ka sii weyn" aaminsan, si diiran u soo dhaweyn macaamiisha cusub iyo wax duug ah gudaha iyo dibaddaba si uu u hago